Press Release issued by the Ministry of Foreign Affairs in response to the Joint Statement of some embassies in Yangon (17 September 2015)
The following is the full text of the Press Release issued by the Ministry of Foreign Affairs on 17 September 2015 in response to the Joint Statement of some embassies in Yangon:
It is learnt thataJoint Statement on election was issued on 15 September 2015 by Embassies of Australia, Canada, Denmark, France, Norway, Japan, Sweden, the United Kingdom and the United States of America in Yangon.
Cognizant of the importance of the upcoming general elections in Myanmar, the Ministry of Foreign Affairs is appreciative of the support expressed by the “Joint Statement” for the successful holding of the elections. However, the Ministry is also concerned that the Joint Statement could bring about unwarranted, negative impacts on the efforts being made by all the people of Myanmar especially when the election process is progressing smoothly, effectively and efficiently inapeaceful and positive environment.
Issuance of such statement at this delicate juncture goes against the peaceful environment the people of Myanmar have established for the successful holding of the elections. The Ministry, therefore, categorically rejects the implications in the Joint Statement that instigate misunderstanding and doubts among the people.
ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ နော်ဝေ၊ ဂျပန်၊ ဆွီဒင်၊ ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်သံရုံးများမှ ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ခုကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မကြာမီ ကာလအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ များသည် မြန်မာ နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးသည်ကို အလေးထားသည့်အလျောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန် ပူးတွဲ ကြေညာချက်ပါ အားပေးထောက်ခံမှုကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ တစ်ဖက်၌လည်း မြန်မာ ပြည်သူများ အားလုံး တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာဖြင့် တက်ကြွစွာ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း အားထုတ် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် နေသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် ချောမွေ့စွာ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ် နေချိန်တွင် ပူးတွဲကြေညာချက်ကြောင့် အပြုသဘော မဆောင်သည့် မလိုလား အပ်သော အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကို စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိပါသည်။
ပူးတွဲ ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြပါရှိသော နိုင်ငံများ၏ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ရသည် ဆိုသည့် အကြောင်းတရားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်ကြီးငယ် များကို တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဘက်လိုက်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်း ပေးနိုင်ရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၏ ၁၅-၉-၂ဝ၁၅ ရက်နေ့ နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီနေ့ သဝဏ်လွှာတွင်လည်း ''မြန်မာနိုင်ငံသည် ဓလေ့ ထုံးတမ်း ပေါင်းစုံ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံ ရှိသည့် လူမျိုးများစွာနေထိုင်သော နိုင်ငံ ဖြစ်သည့်အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် နိုင်ငံ၏ လူမှုသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် မတူညီသည့် ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုများကို ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် ကိစ္စရပ်များ မပေါ်ပေါက် စေရန် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများအားလုံး ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ကြောင်း'' အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အတွင်း လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သဟဇာတ ဖြစ်မှုကို အလေးထားကြောင်း ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ပြည်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးသည် တရားမျှတပြီး လွတ်လပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေးကို ဝိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတွင် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးကို လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား/မ မရွေးခံစားခွင့်ရှိကြောင်း အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကို အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ပူးတွဲကြေညာချက်သည် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အရ အထင်အမြင် လွဲမှားမှုများ၊ သံသယများ ပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည့် တစ်ဖက်သတ် သုံးသပ် ဖော်ပြချက်များ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ သိမ်မွေ့နက်နဲသည့် အချိန်အခါတွင် ပူးတွဲကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အေးချမ်း ကောင်းမွန်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကို ကြိုးစားဖန်တီးနေကြသည့် မြန်မာပြည်သူများ၏ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှု များကို လျစ်လျူပြုရာ ရောက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပူးတွဲ ကြေညာချက်ပါ ပြည်သူများအကြား အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဖော်ပြချက် များကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပယ်ချပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်
* * * Quick Links